Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västerbottens län / Malå
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 12 8 2020
Malå waa degmo yar oo qurux badan oo ku yaal waqooyiga Iswiidhan. Bartamaha Malå waxaa ka agdhow dukaamo, goob caafimaad, dhakhtarka ilkaha iyo iskool. Waxeey u dhowdahay keeymaha, biyaha iyo baadiyaha.
1,727 kiilomitir oo laba jibaaran
Skellefteå 123 kiilomitir
Umeå 200 kiilomitir
Luleå 209 kiilomitir
Dad badan oo degan degmada Malå waxeey ka helaan iney kalluumeystaan, iney miro guraan iyo dheelaan cayaaraha barafka. haddii aad rabtid inaad degtid guri adi kuu gaara waxaad degmada Malå ka heleysaa guryo qiimo jaban. Kusoo dhowoow Malå, wax kasta weey ku dhowyihiin!
Degmada Malå waxaa ka jira jaaliyado badan. In xubin laga noqdo jaaliyad waa qaad loola kulmo dad kale. Haddii aad xiiseyneysid isboortis sida cayaaraha barafka, ciyaaro kooxeed ama inaad faras dabartid waxaa jira jaaliyado isboortis oo badan. Ururka waxbarashada ee Vuxen skolan iyo ABF waxeey koorsooyin ka bixiyaan Malå.
Ururka waxbarashada ee Vuxen skolan
Guriga degmada waxuu ku yaal Storgatan 13 agagaarka biya mareenka. Guriga degmada waxaad ka heleysaa adeegyada soo degida iyo adeegyada isdhexgalka bulshada. Meeshaas waxaad imaan kartaa haddii aad soogalooti tahay si aad u heshid warbixin ku saabsan iskoollada, guri, sidaad ula xireereyso xafiisyada dowladda ama goobaha caafimaaadka.
Adeegyada soo degida iyo adeegyada isdhexgalka bulshada.
Haddii aad tahay waalid ama aad guriga la joogtid ilmo yar waxaad aadi kartiin goobta carruurta ee furan oo eey qabanqaabiso Kaniisada Iswiidhan. Halkaas waxaad adiga iyo ilmahaaga kula kulmi kartiin carruur iyo waalidiin kale,
Waxaad degmada ugu safri kartaa baabuur, bas, tareen iyo diyaarad.
Waxaad waqtiyada safarka ka fiirsan kartaa:
Shaqooyinka ka banaan gudaha Malå